Abazobi bomhleli kufuneka bahlale bejonge | Abadali be-Intanethi
Iris Gamen | 05/04/2022 22:00 | Ezahlukeneyo
El Ihlabathi lokushicilela iminyaka emininzi ngoku, liye latshintsha kwaye yandise kakhulu umbulelo wayo kwintengiso kwimizobo. Umfanekiso, asibhekiseli kuphela kwiifoto, kodwa nakwimifanekiso ekhoyo ngakumbi kubomi bethu bemihla ngemihla.
Ewe, unomdla kwihlabathi lopapasho, Kweli nqaku siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga neli hlabathi kwaye siza kuxela ababonisi abahleliyo onokuthi ungaphoswa..
Iinkampani zonxibelelwano kunye noyilo kunye neengcali, xa kufikwa ekomelezeni, xhasa umyalezo sebenzisa imifanekiso ukwenza imveliso enomtsalane ngakumbi ekwaziyo ukubamba ingqalelo yomthengi.
1 Yeyiphi imisebenzi anayo umzobi womhleli?
2 IMizobo yoHlelo lokuGcina umkhondo
2.3 UJulia Sarda
2.4 URalph Steadman
2.6 UPauline Baynes
2.8 UMalika Favre
2.9 UMikel Jasso
Yeyiphi imisebenzi anayo umzobi womhleli?
Un Umzobo womhleli kufuneka aqeqeshwe kwaye abe nolwazi lokuzoba kunye nokuyila. Ukuba uyincutshe kwinkalo yemizekeliso yopapasho, kulunge ngakumbi.
Owona msebenzi uphambili walo msebenzi uquka yenza imiyalezo ngomzobo, oko kukuthi, banoxanduva lokuyila amaqweqwe, imifanekiso okanye imifanekiso ekhapha okubhaliweyo., banokwenza imifanekiso ehlekisayo kumaphephandaba.
Los abadwebi bemifanekiso yokuhlela ukufikelela kwisiphumo esichanekileyo sokugqibela, sebenza kunye nababhali, kufuneka babambe umongo weengcamango abaxelelwa ngababhali. Kuthathelwa ingqalelo uluntu apho umsebenzi ubhekiswa khona, isimbo kunye nethoni kufuneka zanele ukuze uhanjiswe.
IMizobo yoHlelo lokuGcina umkhondo
Kweli candelo siza kukubonisa uluhlu lwamagama abadwelisi bemifanekiso yomhleli, ekufuneka ubabhaqile kwaye abaza kukukhuthaza.
Lo mzobi une isitayile esinesimilo kakhulu, esisikhumbuza ngee-70s. Kwimizekeliso yakhe, usebenzisa iibhloko ezinkulu zemibala, apho asebenzisa i-palette yemibala ephambili.
Kwincwadi yakhe, isiNgesi asilula, siyasibona kakuhle esi simbo besithetha ngaso phakathi kwamaphepha ayo. Asiyi kumangaliswa ukuba uthenge incwadi yakhe ukuze wenze imizekeliso yakhe kuphela, kuba imnandi.
Este isimbo sobuqu esinjalo, ukwazile ukumsa emsebenzini kwiNew York Times, iWashington Post, El Mundo okanye iNew Yorker. Kwaye kungekuphela nje oku, okungekuko ukuba kuncinci, kodwa ukuba ubonise abavakalisi abahlukeneyo.
Umzobi kunye nombhali odumileyo weencwadi zabantwana eMelika. Wawongwa amatyeli aliqela, ngo-2010 wafumana iMbasa yeCaldecott ngencwadi yakhe, Ingonyama kunye neMouse. Eli bhaso lelinye lawona abalulekileyo kwihlabathi lopapasho laseMelika. Yaqala ukwenzeka ngonyaka we-1938.
Ngemizekeliso engaphezu kwe-100 emva kwakhe, usebenze kwiincwadi zemifanekiso, iincwadi ezingeyonyani, kunye neenoveli. Ngokusebenzisa i-watercolor kunye nobuchule obuphefumulayo, i-Pinkney idala imizobo yelinye inqanaba.
Umzobi weBarcelona, ​​othe wasimisa kweli hlabathi lomfanekiso wokuhlela oko laqalayo. Usebenze kunye nabathengi abafana nePenguin Random House, iTundra Books, uSimon & Schuster, phakathi kwabanye.
Bakhe amanyathelo okuqala kwihlabathi lomzekeliso, yayiyeyeDisney Pixar kunye nomgca wayo wokuhlela. Kuyo wenza imizobo yehlabathi lomdlalo wevidiyo.
Ukusukela ekuthatheni isigqibo sokuhamba ngokuzimeleyo, ubonise iincwadi ezaziwayo ezifana noCharlie kunye neChocolate Factory, uMary Poppins, iWizard yaseOz kunye noAlice eWonderland.
Kwimizekeliso yakhe, unokubona a isitayile esineempawu kakhulu ze-50s, ukusebenzisa izinto ezithambileyo zokunika umthamo kunye nomoya wendalo ngakumbi kwimisebenzi yakhe.
Umzobi waseBritani eyaziwa ngentsebenziswano yakhe noHunter Thompson, ukongeza kwinani elikhulu lemifanekiso yeencwadi kunye namanqaku.
Umsebenzi walo mzobi, ngo umlinganiswa wezopolitiko kwaye ngamanye amaxesha asebenzise ubuchule obufana necaricature ukujongana nemiba yentlalo. Ngombulelo kumsebenzi wakhe, uye wakwazi ukusebenzisana nababhali abahlukeneyo, iincwadi ezibonisa imifanekiso, ii-albhamu zomculo, uchungechunge kunye neekholamu.
Isimbo sakhe sisitayela esiqondakala lula. Ivezwa njenge ubugcisa obumdaka nobothusayo, obusebenzayo nobubambe ngokugqibeleleyo ubunyani obungaphandle kwezithethe zenkcubeko.
Umzobi waseSpain, ngubani Usebenze kumazwe ahlukeneyo kwihlabathi jikelele, uzichaza njengomzobi ohambahambayo. Elinye lamaphulo aziwayo asebenze ngawo liphulo lika-Asisa.
Kwimisebenzi yakhe yongamela a isimbo esisodwa, esinombongo kunye nomlinganiswa onengqiqo. Sisitayile esincinci, esenza ngayo imizobo yakhe ngezinto ezimbalwa, zombini imizobo kunye nombala.
yakhe imizekeliso elula kodwa eqondakalayo nezele yintsingiselo. Ukufikelela kuloo ndawo ye-minimalism kunye nokudala imifanekiso enjalo ekhangayo iyancomeka.
Umzobi wokuqala ukusebenza kwincwadi kaCS Lewis, IziKronike zaseNarnia kunye neminye imisebenzi kaTolkien. UPauline Baynes ubonise ngaphezu kweencwadi ze-200, ukongeza komnye umsebenzi wezorhwebo.
Waqala uhambo lwakhe kwihlabathi lemizekeliso, edala imifanekiso yeencwadi zabantwana, umsebenzi oqhubekayo kubo bonke ubomi bakhe.
UPauline Baynes, wayene isimbo sentelekelelo kwimizekeliso yakhe, kangangokuba kwakubonakala ngathi le misebenzi yaphila. Isimbo esidibanisa iphupha, umlingo kunye nobuchule beencwadi azizobileyo.
Wazalelwa eBarcelona ngo-1978. UCarmen, uchithe ixesha ixesha elifuna injongo yalo kobu bomi, de kube kugqitywe ngalo mzekeliso.
Phakathi kwabathengi asebenze nabo, sifumana amagama abalulekileyo afana neLa Vanguardia, iBoston Globe kunye neNew Yorker. I Indlela asebenza ngayo amaqela ahlukeneyo zobugcisa, kodwa ngokungathandabuzekiyo, ezona zibalaseleyo emsebenzini wakhe ziyi-inki yaseTshayina kunye ne-acrylic.
Imifanekiso kaCarmen Segovia yile kugxilwe phakathi koshicilelo kunye nemifanekiso yeencwadiUkongeza kwiiprojekthi zomntu, kunjalo.
Ukusuka eFransi, sikwazisa oku umzobi onetalente ephezulu nowaziwayo wokuhlela. Uye wasebenzisana nemisebenzi yakhe kumaqweqwe eemagazini ezifana neVogue okanye iNew Yorker. Akazange asebenze kuphela kwihlabathi lokushicilela, kodwa lo mculi uthathe inyathelo elingakumbi ngokuyila ama-sneakers.
Kwimifanekiso yakhe yokuhlela, uMalika Favre udlala ne isitayile se-retro ngaphakathi kwimeko yangoku. Ziyimisebenzi edibanisa isibheno sesondo kunye ne-minimalism egqibeleleyo.
Kwimeko yelizwe, asinako ukusilela ukukhankanya umzobi wokuhlela uMikel Jaso. Ukususela kwiminyaka emininzi Ubonise imidiya efana neLa Vanguardia, El País, Graffica, phakathi kwabanye.. Ukongeza kubavakalisi abahlukeneyo njengePlaneta okanye iPenguin Random House.
Kwimizekeliso yakhe, isebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuziphumeza, kodwa eyona ibalaseleyo kukusetyenziswa kwekholaji. Ngombulelo kule ntlobo yeendlela zobuchule kunye nesitayela sakhe esiyingqayizivele, unokufumana imisebenzi yakhe zombini kwinqaku lephephandaba kunye nokuxhoma eludongeni kwi-studio.
Ngaphakathi kwemisebenzi yakhe, amahlaya okanye ukugxeka kwentlalo kunokufumaneka, okunceda ukuba imisebenzi yakhe ihlale igcinwe kwinkumbulo yababukeli.. Njengoko sinokubona kulo msebenzi kwimivuzo yaseSpain yeDiario Público.
Njengoko unokubona, kukho imizobo emininzi yelizwe neyamazwe ngamazwe ekufuneka ithathelwe ingqalelo kumzobo wokuhlela. Kwaye eli hlabathi liyinto enomdla. Ukufumana umfanekiso ukuze ubambe undoqo wento ofuna ukuyithetha ayingomsebenzi olula, ngokuchaseneyo. Yiyo loo nto ingumsebenzi ekufuneka waziwe phakathi kwabazobi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Abazobi bomhleli mabahlale bejonge
Izitayile zegraphic ezahlukeneyo ekufuneka ziqwalaselwe